किंग्स लाउञ्ज पोखरामा फेस्टिवल अफर सुरु ! – Nidar News
दशैं, तिहार तथा छठ लगायतक चावपर्वको अवसर पारेर ह्याप्पी फेस्टिबल अफर सुरु
किङ्स लाउन्ज पोखराले दशैं, तिहार तथा छठ लगायतक चावपर्वको अवसर पारेर ह्याप्पी फेस्टिबल अफर सुरु गरेको छ ।
साथै साँझ साढे ५ बजेपछि फुड एण्ड ड्र्क्सिमा १५ प्रतिशत छुट अफर रहेको किंग्स लाउञ्ज पोखराका एक संचालक बशन्त गौचनले जानकारी दिए । दशैं, तिहार तथा छठ लगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गरि मेनुको मूल्य २० प्रतिशतले घटाउनुका साथै ह्याप्पी आवरमा डिस्काउन्ट अफर लागू गरिएको किंग्स लाउञ्जले जनाएको छ । ह्याप्पी आवर अफर चाडपर्वपछि पनि जारी रहने छ भने फुड एण्ड ड्र्क्सिमा १५ प्रतिशत छुट अफर छठसम्म रहने गौचनले बताए ।
एक महिलालाई आफ्नै श्रीमान र सासु-ससुराले जलाएर हत्या गरेको आशंका!
३१५ जना विद्यार्थी बिरामी भएपछि तीन दिन विद्यालय बन्द
सदस्यता विवाद ,नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखामा तालाबन्दी